LEGO® DC Mighty Micros 1.7.1418 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.7.1418 လြန္ခဲ့ေသာ5လက
ဒီအခမဲ့နှင့်ပျော်စရာLEGO® DC ကကာတွန်းပြိုင်ကားဂိမ်းထဲမှာ Lego Batman ™, Lego Wonder Woman ™နှင့်အတူသို့မဟုတ် Lego Superman ™နှင့်အတူ Play ။
ကျပ်တည်းစွာလိုက်သို့မဟုတ် လိုက်. ခံရ! Batman ™သို့မဟုတ် Superman ™သငျသညျအမီလိုက်နိုင်မီသင်က Killer ပိုးဖလံ™သို့မဟုတ် BIZZARO ™အဖြစ်ကစားနှင့်မြို့လွတ်မြောက်ရန်နိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်သင်မဟုတ်ဘဲစူပါဟီးရိုးဇာတ်ကားမျိုးဖြစ်ပါ့မလား
သငျသညျမျိုးစုံပတ်ဝန်းကျင်မှာမှတဆင့် Race နှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးLEGO® DC ကစူပါဟီးရိုးနှင့်အတူစီးနင်းခံစားနိုင်။
သငျသညျအရေးယူမှုအတွက်သင်အကြိုက်ဆုံးLEGO® DC ကတန်ခိုးကြီးသော Micro အစုံမြင်ချင်ပါသလား?
* မိုဃ်းကောင်းကင်ထဲကLEGO® DC ကတန်ခိုးကြီးသော Micro Batcopter နှင့် Swat Killer ပိုးဖလံ™အတွက်လေကြောင်းကတဆင့် လိုက်. တိုက်! အဆိုပါပျံသန်း bug ကိုရဲ့အတောင်ပံမှာ Batman ရဲ့ Batarang ပစ်နှင့် crashing ဟာလူကြမ်းပေးပို့ပေမယ့်ပိုးအိမ်သေနတ်အဘို့အထွက်ကြည့်ပါ။
* ကမ္ဘာပျက်™သည်သူ၏တန်ခိုးကြီးသော Micro ကားတစ်စီးတက် powering နှင့်သူ၏ကလပ်နှင့်အတူတိုက်ခိုက်ဘို့အတွက်သွားဖြစ်ပါတယ်။ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Wonder Woman ™သူမရဲ့မမြင်နိုင်သောဂျက်အတွက်လူကြမ်းန်းကျင် zooms အဖြစ်သူမ၏ခွန်အားကြီးသောထား, ဒိုင်းလွှားကိုသုံးပြီးပြန်ဒဏ်ခတ်!
* စစ်တိုက်သို့ချဲ့ခြင်းနှင့်သင်လုပ်နိုင်သည် -if Bizarro ™ဖမ်း! အဘယ်သူသည် Superman ရဲ့မစုံလငျ nemesis ကသူ့နောက်ကျောမှတန်ခိုးကြီးသော Micro ကားတစ်စီး -front အတွက်လာမယ့်ဖွင့်လတံ့သောဦးတည်ချက်သိတယ်။ Bizarro ရဲ့စွမ်းအင်ရဘူးမှအပြာရောင် Kryptonite ကိုသုံးပါပေမယ့်အစိမ်းရောင် Kryptonite ထွက် watch! ဒီအရူးစစ်တိုက်အနိုင်ရပါလိမ့်မယ်သူကိုကြည့်ဖို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆန့်ကျင်ကုမ္ပဏီကြီးလက်သီးဝင်တိုး။
* စုဆောင်းနှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံး, DC ရုပ်ပြဇာတ်ကောင်အဖြစ်ကစားနှင့်3ကွဲပြားခြားနားသောကမ္ဘာစူးစမ်း!
ကလေးတွေ 5-12 များအတွက် * ဂရိတ်ပျော်စရာ!
စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်လူကြမ်းအဖြစ်နှင့်သူရဲကောင်းများအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန် * ပျော်စရာချိတ်ဆက်သရုပ်ဖော်မှုများ,
* ဘလူးတုသ်ဂိမ်း Controller ပံ့ပိုးမှု
Lego DC ကတန်ခိုးကြီးသော Micro ကစားရန်အခမဲ့နှင့်မျှမတို့အတွက်-app purchase ပေးထားပါတယ်။
Lego နှင့် Lego လိုဂိုအဆိုပါ Lego Group ၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။ © 2016 အဆိုပါ Lego Group မှ။
appstv စတိုး 44.17k 84.37M
APK ဗားရွင္း 1.7.1418